Ndị nwere ihe mkpuchi kandụl na-atọ ụtọ
site na nhazi na 20-07-30
Agba Amber, agba awọ, ma ọ bụ agba ọ bụla na Panton Card. Ibe doro anya Crystal, okomoko na oke njedebe, na ọnụahịa asọmpi na MOQ dị ala.
Ihe ndị a na-edo edo edo edo edo (iko shuga, ite nnu, ite, efere, wdg)
* Ihe ngosi ohuru nke 2020 * Ihe zuru oke mejuputara ojiji gi di iche * Agba di iche ma di nma, ihe ejiji na nke ugbua
18oz 540ml Round Bottom Glass Candle Jar with gold / Silver Liid
* Jar Jar 18oz, anyị nwekwara ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ / ikike kandụl ite * ite a bụ Amber agba, anyị nwere ike ịme agba ndị ọzọ dịka ihe ndị ahịa chọrọ
Jars ifuru agba dị iche iche
* Classical Pat * * Classic Colors * Ndị a ma ama ma nabata nnukwu
“Glass Industry Air Pollutant Emission Standard” gabigara nyocha ọrụ nke usoro maka ikwupụta
Na Machị 26, 2020, “Industrylọ Ọrụ Nnyocha Nleba Anya Maka Gburugburu Ebe obibi na Light Light, Chinese Academy of Sciences, China Daily Glass Association, China Fiberglass Industry Association, China Building Materials Research Institute, China Building Glass and Industrial Glass Associa…
Ikwu okwu banyere Teknụzụ Teknụzụ nke ụlọ ọrụ Glassware Daily
Inno nwere ihe jikọrọ ya na mmepe nke ụlọ ọrụ. Mmepe nke ulo oru bu ihe eji usoro agha ndi mmadu ndi mmadu na ndi mmadu n’agha. Ọ na-agafe n'oge ọchụnta ego, oge uto, oge ntozu, na oge nlaazu. Mgbanwe ahụ na ...
Na nkeji mbụ, mmepụta nke ụlọ ọrụ ube mmiri kwa ụbọchị dara site na 25.93% afọ-afọ
1） Na nkeji mbụ, arụpụta nke ụlọ ọrụ ube kwa ụbọchị dara site na 25.93% afọ-afọ. Production nke iko-eji ubochi eji eme ihe kwa ubochi na iko ngwongwo dika ngbasa ozi nke onu ogugu nke onu ogugu nke National Bureau of Statistics nke ihe ubochi ubochi obula na iko nnabata iko ...